जनताले नाक खुम्च्याउनु पर्ने स्थिति आउन नदिने हिसाबले काम गर्दै छौः उप प्रमुख अञ्चला चौधरी - TV Annapurna
June 9, 2018 June 9, 2018 Annapurna TV
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुरा भयोे । करिब दुई दशकदेखि कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पायो । चुनावका बेला बाँडिएका आश्वासन र देखाइएका सपना, कति सपनामै सीमित छन् त कति कार्यान्वयनको क्रममा छन् । कतै कर्मचारी अभाव त कतै नीति, नियम अभावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् । एकातर्फ लामो समयपछि भएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमाथि जनता अपेक्षाको चाङ ठुलो । अर्कोतर्फ लामो समय कर्मचारीको मनोमानीमा चलेका स्थानीय निकायलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने बनाउनुपर्ने चुनौती । कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिकामा यो एक वर्षको अवधिमा के कति काम भयो ? जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् र आगामी नयाँ कार्यक्रमहरू के के छन् ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर पत्रकार प्रकाश मिश्रले नगरपालिका उप प्रमुख अञ्चला चौधरीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ ।
प्रस्तुत छ वहासँग गरिएको कुराकानीः
निर्वाचनमा धेरै प्रतिबद्दताहरु गर्नु भयो । जनताको आसा र भरोसा पनि धेरै नै छ । यस्तो अवस्थामा कामहरू कसरी अघि बढाइरहनु भएको छ ?
-जनताको आशा अनुसार काम गर्ने हिसाबले अघि बढेका छौ । खासमा यो पहिलो वर्ष भएकोले पनि व्यवस्थापनमा बढी समय खर्चिनु परेको छ । अब धेरै थोरै अनुभव साथमा भैसक्यो जनताले नाक खुम्च्याउनु पर्ने स्थिति आउन नदिने हिसाबले अघि बढेको छु । आफ्नो कार्यकालको ५ वर्षमा समृद्ध नगर बनाउने योजनाका साथ बढेको छु ।
तपाईँ निर्वा्चित भएर आएपछि के परिवर्तन गर्नुभयो र के के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
-खासमा अब आउने बित्तिकै पुरै परिवर्तन एकैपटक गरिने कुरा हैन बिस्तारै हुँदैछ । विकासका कामहरू अघि बढेका छन् । हामीले समावेशी विकास कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छौ । त्यसका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य अघि बढि रहेकोछ । ६८ हजार जनसङ्ख्या रहेको नगरपालिका हो हाम्रो अब सबै तथ्याङ्क कागज रूपमा राख्नु भन्दा सफ्टवेयरमा राख्ने कार्य अघि बढाएका छौ । यो काम जिल्लामै नमुना काम हो ।
जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न कारणले काम गर्न सहज नभएको गुनासो गर्छन् । खासमा कत्तिको सजिलो वा गाह्रो के छ काम गर्न ?
-एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो तपाइले पक्कै पनि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न निकै गाह्रो छ । जनताले धेरै आसा राख्नुभएकोले पनि काम भएका कुराहरू नजरमा आउदैनन् । अनि अर्को कुरा जनप्रतिनिधि लाई कर्मचारी नहुदा काम गर्न निकै समस्या हुने गरेको छ । अब हाम्रो नगरपालिकामा पनि सात जना अधिकृत दरबन्दीमा जम्मा एक जना अधिकृतले काम चलाउनु परेको छ । प्रत्येक वडामा वडा कार्यालय खोल्न सकिएको छैन । यिनै समस्याले अलि काम गर्न गाह्रो हुने गरेको हो ।
तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि के कस्ता उजुरी आउछ्न ? अनि कसरी मेलमिलाप गराइरहनु भएको छ ?
हो, उप प्रमुख स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजक हुने कानुन अनुसार म गौरिगंगा नगरपालिका स्तरिय न्यायिक समितिको संयोजक हु । जनताको न्यायिक समिति माथि निकै आसा भरोसा छ । यहाँ दिनहु महिला हिंसा , बहुविवाह ,जग्गा विवाद लगायतका उजुरी आइरहेका छन् । र हामीले पनि दुवै पक्षलाई जित जितको अनुभूति हुने किसिमले काम गरिरहेका छौ । यहाँ उजुरी आइसकेपछी कसैलाई पनि जित वा हारको अनुभूति नहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो मुख्य ध्यान हुन्छ। हामी सामान्य छलफल गराएर मेलमिलाप गराइरहेका हुन्छौ ।
तपाइले अरू भन्दा फरक के गर्नु भयो र आगामी योजनामा अलि फरक के गर्न खोज्नु भएको छ ?
-मैले अघि पनि भने जिल्लामै नमुना कामको रूपमा अघि बढाएको छौ । अब अरू नयाँ योजना पनि छन् । यहा थुप्रै नदिनाला छन् र नदिनालाको बगरलाई उपयोग गरेर स्थानीय स्तरमा समूह बनाइ तरकारी तथा फलफुल खेती गर्न लगाइ आयस्रोत बढाउन सकिने कार्यक्रम ल्याउने योजनामा छु । अनि अर्को अब छिट्टै उप प्रमुख सँग महिलाको स्वास्थ्य कार्यक्रम लाई लन्च गर्ने तयारीमा छौ । यश कार्यक्रम बाट एउटा नयाँ आयाम थपिने विश्वास छ । जस्तै यसमा नबबिबाहित दम्पती लाई घरमै गएर स्वास्थय सम्बन्धी जानकारी दिने ,बच्चा जन्माउदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा,नियमित चेकजाचका कुरा अनि अर्को त्यस्तो अवस्थामा आमा र शिशुले सरकार बाट पाउने सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी लगायत विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने लगायतका योजना छन् । साथमा एउटा नयाँ कार्यविधि बनाएर
“ एक्सन अन द स्पोट “ को पनि सुरुवात गर्ने तयारीमा छु ।
के हो नि यो “ एक्सन अन द स्पोट “ ?
-खासमा यो पनि एउटा फरक गर्ने प्रयास गरेकी छु । यसमा के हुन्छ भने काम गर्न कुनै मिति कुर्न पर्दैन यदि कार्यविधि पासमा कुनै कानुनी जटिलता भएन भने । यसको मर्म भनेको नगरमा कुनै पनि कुराको आवश्यकता महसुस भयो भने यही कार्यविधिमा टेकेर निर्णय गरेर तत्काल काम गर्न सकिन्छ । कुनै योजना कुरेर बस्नु पर्दैन ।
तपाईँ अनुगमन समितिको संयोजक पनि विकास निर्माणका काममा कसरी अनुगमन भइरहेको छ ? अनि कति काम सकियो त अहिले सम्म ?
विकास निर्माणका कामको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले नब्बे प्रतिशत काम सकिसकेको अवस्था हो । सबै वडाले उपभोक्ता समिति बनाएर कामहरू भैसकेको छ । अनि रहायो अनुगमनको कुरा हामीले तीन तहको अनुगमन समिति बनाएका छौ र तिनै तहको अनुगमन सकिएपछि मात्र भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ ।
अन्तर्वार्ता, प्रदेश- ७, समाचार
भैरहवाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको ट्रक त्रिशूलीमा खस्यो, दुई बेपत्ता
अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली मंगोलिया जाँदै
डोटीको जोरायल गाउँपालिका–२, धारापानीमा गाडीको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एक जना घाइते...
स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा कामकाज प्रभावित
डोटीका स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा सरकारी कामकाजमा समस्या हुन थालेको छ । जिल्लाका कुल नौ स्थानीय...